पूर्वप्रेमीकाकी छोरीसँगको प्रेम
बुधबार, ६ बैशाख, २०७४
फेसबुकमा सर्च गरें, भावना पौडेल । एक मात्र पात्र फेला पर्यो । फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गरें । एड भयो ।
एउटा विल्कुल अपरिचित अनुहार । मैले खोजेकी भावना त्यो परिन । धेरै वास्ता गरिनँ । एउटा स्वभाविक फ्रेन्डस भन्दा बढी महत्व दिइनँ ।
तर, क्रमशः मेरा अपडेटहरुमा उ धेरै कमेन्ट लेख्न थाली । कुनैमा पनि नविराई ।
‘समस्याको समाधान होइन सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’ स्टयाटस लेखेँ ।
‘कसरी ?’ कमेन्टको अपेक्षासहितको कमेन्ट ।
‘कतिलाई समयले जन्माउछ त कतिले समयलाई जन्माउछ ।’ अर्को अपडेट ।
‘समयलाई पनि मान्छेले जन्माउँछ त ?’ कमेन्ट ।
‘कसले जन्माउँछ त ?’ यस्तै यस्तै ।
खै किन हो ? त्यो चिचिली केटी नराम्ररी मेरो फिलिङ्समा रमाउन थाली । त्यसलाई के थाहा ? मैले फेसबुकमा अपडेट गर्ने भावना र वास्तविकताबीच निक्कै अन्तर छ भनेर ।
यद्मपि उसको कमेन्ट र फिलिङ्हरुमा म त्यो पूरानी भावनाको घुर्मैलो छायाँ देख्थें ।
‘तपाईसँग भेट्न पाएकोमा अत्यन्त खुसी छु ।’ मेरो वालमै लेखिदिइछ । म दंग परें ।
मलाई कहाँ भेटी ? फेसबुकमा । इन्टरनेटको यति ठूलो सामाजिक संजालमा मलाई भेट्दा किन खुसी हुनुप¥यो त्यसलाई । सायद त्यसलाई ‘म’ थाहा नभएर हो। मैले उसको वालमा केही पनि लेखिदिइन । जरुरी ठानिनँ ।
एकदिन निरास फिलिङस सेयर गरें । ‘यो काइते जिवनमा सुख र खुसी भन्ने चिज कहिल्यै पनि आएन ।’ हो, यो अपडेटसँगै म उसको कमेन्ट चाहन्थें । तर कमेन्ट गरिन । म्यासेज गरिछ ।
‘तपाईको जीवनमा पनि सुख र खुसी छैन भनेको पाउँदा निक्कै नरमाईलो लाग्यो ।’
कमेन्ट नगरेर किन म्यासेज गरी ? फेरि मेरो जीवनमा सुख र खुसी नहुँदा उसलाई किन नरमाइलो लाग्नु प¥यो ? उसको प्रोफाईल हेरें । फोटो एल्बम हेरें । १२ कक्षामा पढ्ने, होटल म्यानेजमेन्ट– काठमान्डौमा । राम्री । उ किन मसँग निकट हुन खोज्दैछे, हँुदैछे । सोच्न बाध्य भए । सायद उसले ‘म’ नचिनेर हो ।
त्यसलाई के थाहा ? म उसको बा उमेरको मान्छे हूँ । अनि मसँग सम्झनेबाहेक वर्तमान अनुभूति छैन । मेरो अनुहारका प्रत्येक रेसाहरुमा ग्लानी, निरासा र वेदनाहरु मात्र छन् ।
मर्न नसकेर बाँचेको र बाँच्न नसकेर मर्न खोज्नेको झुण्डको एक हुँ भनेर । सायद अनुहार पुस्तिकाका मेरा कथित डायलगहरु पढेर उ
उत्साहित भएको हुन सक्छे । बिचरी भ्रममा छे ।
मेरो झुसे दाह्री र दया लाग्दो, रिस उठ्दो अनुहार देखी भने तर्सेर भाग्छे होला । फेसबुकमा त मैले हिरो फोटो राखीदिएको थिएँ र पो !
हो, म त्यो कलिली÷राम्री केटीको बारेमा धेरै सोच्न थालिसकेको थिएँ । टाढा हुन खोज्थें, सक्दैनथें । एक किसिमको डर, लाज वा ग्लानी हुन्थ्यो । तैपनि किन हो कहिलेकाँहि त्यहिं केटीको सम्झनामा यो मन रमाउथ्यो । फोटो लार्ज गरेर हेर्न मन लाग्थ्यो । थाहा थिएन मलाई किन त्यस्तो हुन्थ्यो ?
गुलाबको फूल गिफ्ट आयो । आफैं भित्र गुम्सिएँ, आफैं फुके । मन उड्यो, वशमा ल्याएँ । भावनाको बेग्लै तरङ्ग पैदा भो । म डेढ दशक तरुनो भएँ । ऐना हेरें । आफैसँग दंग परें ।
मलाई थाहा थियो उ प्रायः साँझ छ बजेदेखि अनलाइनमा हुन्छे । उसको अपडेट र कमेन्टहरुले बताउँथ्यो । एउटा लोभ, उ सँग च्याट गर्ने । मेरो नेट टाइमटेबल चेन्ज गरेर उ अनुकुल बसें ।
अनलाइनमा भेटियो । मन ढक्क भयो ।
आफैंभित्र लजाँए । म रातो÷तातो भएछु । कान छामें ।
.......यस्तो पनि हँुदो रै’छ जस्तो भयो ।
hi टाईप गरे । सेन्ड गर्न सकिनँ ।
पछि उतैबाट आयो hello । सजिलो भयो । सुरु भयो फेसबुक च्याट– भावना पौडेलसँग ।
‘कहाँ हुनुहन्छ ?’
‘बानेश्वर । तपाई ?’
‘कस्तो लागिरहेछ ?’ कस्तो प्रश्न गरेकी ।’
‘रमाईलो ।’ नसोची उत्तर दिएँ ।
तपाईसँग भेट्न चाहन्छु ।’
................’ च्याटरुमबाट बाहिरिएँ । नमज्जा लाग्यो । नुहाउँदा नुहाउँदै धारा बन्द भए जस्तो । पखालिन पाईनँ । म पनि त उसलाई भेट्न चाहन्थें नि । मलाई किन जान्ने हुुन परेको ? आफैंलाई गाली गरें ।
फेरि फोटो लार्ज गरें । डाउनलोड गरेर जुम गरें । कस्ती मीठी !
किन किन निक्कै नरमाईलो लाग्यो । ठूलै गल्ती गरेजस्तो । प्रभातमै बादलले सूर्य छेके जस्तो । के साँच्चै रिसाई होली ? कि रिसाएजस्तो मात्र गरेकी ? अब सम्बन्ध अगाडि नबढ्ने पो हो कि ! म बहकिएछु । बाहिर निस्केर एक क्वाटर रोयल स्टेज ल्याएँ । १० वटा सूर्य चूरोट ल्याएँ अनि उसैको प्रोफाईल र फोटो हेर्दै पिएँ, उडाएँ । धेरै सोचें ।
यो उमेरमा त्यो केटीसँगको अत्यन्त साधारणबाट सुरुवात यो सम्बन्धले मलाई कुन मोडमा पु¥याउने हो ? नजानिँदो पारामा म फसें । कुन भड्खालोमा पर्ने हुँ ? के नै पो भएको थियो र । तैपनि ।
रातको साडे नौ भएथ्यो । मन मानेन । उसलाई म्यासेज गरें । भोलि बिहान आठ बजे मिनभवनको ग्रिन क्याफेमा भेट्ने ल ।
जिज्ञासा, कौतुहलता र दुविधाको भारी बोकेर रुमबाट निस्किएँ । साथमा एउटा मीठो तिर्सना पनि । रिसाएर नआउने पो हो कि ? लाईभ कस्ती होली ? कस्तो पहिरनमा आउली ? के भन्ली ? मलाई के भन्ठान्ली ? मैले के भन्ने ? कसरी प्रस्तुत हुने ? दयालाग्दो बूढो पो देख्छे कि !
उसको कल्पनाको चित्र भन्दा कम गुणस्तरको पो हुने हो कि ? कम बोल्छु, धेरै सुन्छु र सकेसम्म मीठो बोल्छु, प्रभाव पार्छु । योजनाहरु पनि बनाएँ ।
सेभिङ गरेर चिटिक्किन पनि खोजेको थिएँ । म ग्रिन क्याफे पुगेकोमात्र के थिएँ उ पनि आईपुगी । स्कूटरबाट झरेर हेलमेट सिउरिई अनि भनी ‘हाई ।’ मैले पनि ‘हाई’ फर्र्काएँ । स्लिम, मिडियम साईज हाईट, छरितो ज्यानकी, सल्सलाउदी, सुलुत्त परेकी । गोरी, कोरियन हेयर स्टाईल, हरियो टिसर्ट र नीलो जिन्स पाइन्टमा ।
मैले सोचे भन्दा सुन्दर । फेरि एकदमै म्याच गर्ने मेकअप । गाजल, लिप वेट, आई ब्रो, ईयर रिङ, नङ पोलिस । कल्पनामा भन्दा पनि मीठो वास्वीकता । रुफ टपमा बसियो । दुई थान कफी उसैले अर्डर गरी । मलाई सोध्दा पनि नसोधी । त्यति बेला म लाटिएको थिएँ । चिमोट्दा पनि थाहा नहुने जसरी । उसैले झस्काई । ‘आराम हुनुहुन्छ ?’
‘ठिक छु । तपाई ?’ ‘
‘ठीक छु ।’ म झनै भुतुक्क भएँ । बोल्दा मुस्कानसँगै आँखा र आँखाको भाकासँगै टाउको हल्लाउने उसको बानी थाहा पाएँ । साहै्र मन प¥यो । अविचलीत हुन्छु कि भन्ने भयले शतर्क थिएँ ।
‘म आज एकदमै खुसी छु नि ।’ उसले भनी ।
‘तपाईसँग भेट्न पाएकोमा ।’ झण्डै ‘किन’ भनेर सोधेछु । सम्हालीएर भने– म पनि खुसी छु । ‘हिजो रिसाएको हो ?’ सोध्न खोजें तर सकिंन । उ आफैले भनी– हिजो कुरा
गर्दागर्दै चार्ज सकिएर कस्तो बोर भयो । म भित्र भित्रै गुदगुदिएँ । फेरि उनै बोली, ‘मलाई तँपाई आफ्नै मान्छे जस्तो लाग्छ । भेटेपछि त झन्... मलाई सहज बनाउँदै थिई ।
‘तपाई म्यारीड कि अनम्यारीड ?’ सोधी ।
‘ढाँटेको त होईन नि । लोग्ने मान्छेहरुले ढाँछ्छन रे ।’
होइन, मैले किन ढाँट्न प¥यो र तपाईसँग ?’ अपनत्व भाव दर्शाएँ ।
के गर्नु हुन्छ ?’
‘केही पनि गर्दिंन, तपाई नि ?’
‘स्टुडेन्ट, अरु के र !’
‘बुवा, ममी ?’
‘डेडीको कन्सल्सटेन्सी छ । मामु हाउस वाईफ । माईन्ड नगर्ने भए एउटा कुरा साधुँ ?’
‘बिहे किन नगर्नु भएको ?’ एउटा प्रहार गरी ।
‘थाहा छैन ।’ सहज बन्न खोज्दै उत्तर दिएँ । उ पनि एकैछिन मौन रही । उसको अनुहार हेरें । भावुक देखिन्थी । म पनि एकाहोेरिहेछु । उसैले झस्काई ।
‘कहिले गर्ने त ?’ अति अप्ठ्यारो प्रश्न तेस्र्याई ।
बिहे नै नगर्ने सोच छ ? भन्न मन लागेन । भनें, ‘थाहा छैन ।’ झन् गम्भीर भई । पक्कै केही बुझी ।
‘कसैसँग प्रेम गर्नु भयो ?’
‘मैले गरें, उसले गरीन ।’
‘प्रेमिका छ ?’
‘थिई तर प्रेम थिएन ।’
‘अहिले भन्न खोजेको ?’
‘थाहा छैन ।’ उही सजिलो जवाफ दिएर पन्छन खोजें । यस्तो लाग्दैथ्यो, म अदालतमा बयान दिंदै छु । कस्ती छिचरी केटी, केही सोध्न पनि हिचकिचाउँदिन । आँटीली ।
‘यसलाई के मतलव ?’ भन्ने कुरा पनि भएन । तर उसको सोधाईले म निसास्सीएको थिएँ । उम्कन खोज्दैथें । फेरि सोधी ‘तँपाईको नजरमा म को ?’
‘थाहा छैन ।’ फेरि उही उत्तर ।
‘तपाईले किन बिहे नगरेको ?’
‘बाई द वे अव हामी निस्कनु पर्छ । तपार्इँको मोवाइल नम्बर ?’ मोबाईल नंम्बर दिएँ । मिसकल गरी । हामी निस्कियौं ।
‘म तपाईलाई घरसम्म पु¥याईदिन्छु, बस्नुहोस् ।’ स्कुटी स्टार्ट गर्दै भनी । मैले पर्दैन भनें । मानिन, ‘चोकसम्म त जाउँन ।’ सुखै पाईंन ।
मगमग बास्ना आउने कपाल र ज्यान । मेरो मस्तिष्कले धेरै सोच्न सकेन । म लाटो भएछु । चोक आयो, म झरें । उ ‘बाई’ भन्दै बबरमहल तिर लागी । लामो खडेरी पछि पानी परेको बिहान जस्तो लाग्यो जीवन । ओइलाउन लागेको फूलमा पानी हाल्ने माली आई । अब फेरि फुल्छु, फल्छु ।
उसका बुझिनसक्नु कुराबाट बुझेको कुरा, उ मेरो समिपमा हुँदा त यति सुन्दर लाग्दैछ अपनाउँदा कस्तो होला ? लाग्यो, सदावहार वसन्त छाउनेछ मेरो जीवनमा । सुन्दरता आँखाको लागि मात्र हो भन्ने कुरा ‘हो’ जस्तो लागेन । कसलाई मन नलाग्ला र ! राम्रो फूल देखेपछि स्पर्श गर्न र बास्ना सँुध्न । फूलको आकर्षण उसको कोमलतामा छ र मधुरतामा ।
हो, भावना एउटा फूल हो । उसलाई अहिलेसम्म देखेको मात्र छु । स्पर्श गर्ने र बास्ना सुँध्ने लोभ लागेर आयो । कल्पनामा उसलाई छोएको देखेँ, बास्ना लिएं । सँगसँगै घुमेको मात्र होइन सुहागरातदेखि नानीबाबु खेलाएको र बुढेसकालमा तातो पानी खुवाएकोसम्मको कल्पनामा रमाएँ । उसको भाव भङ्गी, गफ र शैलीले मलाई यो कल्पनासम्म पुग्न सहज बनायो । मेरो उसको धरातल समानन्तर छ जस्तो लागेन ।
बेलुका अनलाईनमा वसें । ‘हामी सपरिवार भोलि मनकामना दर्शन गर्न जाँदैछौ ।’ म्यासेज गरी ।
‘शुभयात्रा’ यहीं मात्रै हो मेरो रिप्लाई ।
भोलिपल्ट दिनभर उसकै सम्झना र कल्पनामा डुबेर दिन बिताएँ । भेट्ने इच्छा
तिव्र हुँदै गयो । मन चन्चल र अस्थिर हँुदै गयो ।
आज त पक्कै फर्कन्छन् । भोलि त भेट्नु पर्छ । कल्पनाको योजनामै दिन बित्यो । बेलुका अनलाईन बसें । फेसबुक लग ईन गरें । उसले ‘मनकामना यात्रा’ शिर्षक दिएर फोटो एल्बम बनाएकी रहिछ । हेरें ।
एउटा फोटो उसले बुबाममीसँग खिचेको रहेछ । त्यो फोटो देख्ने बित्तिकै म छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ । हुरीले एउटा फूल भाँच्यो । फेरि खडेरी प¥यो । अन्धकार भो । मैले सर्च गरेको भावना त उसकी आमा पो रहिछ ।
पूर्व प्रेमीको छोरी पो रहिछ यो भावना त । मेरै रगतको अंश रहिछ । म अर्धपागल झैं भएँ । सोच्न सकिनँ । तै पनि उसलाई एउटा म्यासेज गरें ।
‘भावना, अब म तिमीसँग चाहेर पनि नजिक हुन सक्दिनँ । अब कहिल्यै फेसबुक लग ईन पनि गर्दिंन । कृपया मेरो मोबाईलमा म्यासेज वा कल गरेर सिमकार्ड चेन्ज गर्न बाध्य नबनाउ । मलाई जे ठाने पनि ठान । मेरो नजिक आउने कोसिस नगर । अब हाम्रो कहिल्यै भेट नहोस । सरी । बाई....................